သင်အနှစ်သက်ဆုံး သြဇာညောင်းသူများသည်လည်း Camper တွင် ခရီးသွားကြသည် - THE INDIAN FACE
ငါတို့မကြာသေးခင်ကမင်းအကြောင်းပြောနေတာ camper ဗန်တော်လှန်ရေးခရီးသွားလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါဟာငါတို့ရဲ့စွန့်စားရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ငါတို့ရဲ့အရာ ၀ တ္ထုရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး အိန္ဒိယငါတို့လည်းမင်းလိုလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့သက်တောင့်သက်သာဇုန်ကနေထွက်ပြီးလူသိများတဲ့အရာတွေကိုပေးချင်တာငါတို့သိတယ်။ #VanLifeမရ။ ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကဘယ်ကလာတာ၊ ဘယ်လိုဗင်ကားအမျိုးအစားတွေရှိနေတာလဲ၊ အတွေ့အကြုံရဲ့အကောင်းအဆိုးရှုထောင့်တွေ၊ ဒီယာဉ်တွေငှားရမ်းမှုမှာအလုံးအရင်းနဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်သင်လွတ်သွားခဲ့ရင်ဖတ်ကြည့်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ စကားလုံး အိန္ဒိယ!
ယခု၊ ဤအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ခေတ်စားလာလျှင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားနေစဉ်ကန့်သတ်ထားသောကပ်ရောဂါနှင့် Covid-post တင်းကျပ်မှုများကြောင့်သာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သြဇာရှိသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ငါတို့ဖော်ပြထားတဲ့ငါတို့ရဲ့ website မှာတင်ထားတဲ့စပိန်မှာဒီလိုဗင်ကားအမျိုးအစားငှားရမ်းမှုမှာခေတ်အမီဆုံးကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုကိုငါတို့တွေ့ခဲ့တယ်။ Feather Van သည်မရ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မွေးဖွားပြီးသူသည်ခရီးသွားရှာဖွေသူဘက်မှထုတ်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်။ ဤအံ့သြဖွယ်စီမံကိန်းကိုတာဝန်ယူရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးသည်သြဇာလွှမ်းမိုးသူ Alba Paul Ferrer နှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်းLucíaဖြစ်ပြီးသူတို့၏ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်အလိုအလျောက်ပြောဆိုသည်။ သူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုသူတို့သိသည်။
၎င်းမှာ ဤစခန်းချအငှားကုမ္ပဏီအပြင် အခြားများစွာသော အခြားသူများကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သြဇာကြီးမားသူများ လက်ရှိမြင်ကွင်းကျယ်အတွင်း၌၊ ငှားရန်၊ ဝယ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့ကဘာလဲဆိုတာမင်းသိချင်သလား။ ငါတို့မင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။
CAMPER အတွေ့အကြုံများ နေထိုင်ခဲ့ကြသော သြဇာညောင်းသူများ
1. GOTZON MANTULIZ (@gotsonmantuliz)
Basqu ဒေသကွန်ယက်တွင်လက်တွေ့ပြပွဲ EITB (El Conquistador del Fin del Mundo) ၏ EITB (El Conquistador del Fin del Mundo) ပဉ္စမမြောက် EITB (El Conquistador del Fin del Mundo) ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြသနိုင်သည့်ပထမဆုံးစပိန်မော်ဒယ်၊ ဒီဇိုင်နာနှင့်စွန့်စားသူ၊ ။ ။ င်း ပိုရိုင်းပြီးရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓာတ် သူ၏စခန်းတွင်းရှိ စပိန်နှင့်ပြည်ပရှိ အလှဆုံးထောင့်များကို သင့်အား သိရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် အားကစားဝါသနာပါသူရေလွှာလျှောစီးခြင်းနှင့် အခြားရေလှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်သက်ပြီး သူ၏ဓာတ်ပုံများစွာတွင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သူ၏ဘုတ်ပြားနှင့် သူ၏ရေစိုဝတ်စုံကို တွေ့ရသည်၊၊ အဖြစ်အပျက်.
၂။ DANIEL ILLESCAS (@danielillescas)
Daniel Illescas သည်သူ၏ Instagram အကောင့်၌ Follower တစ်သန်းရှိပြီး၎င်း၏အကြောင်းအရာသည်မည်သည့်အကြောင်းကိုမဆိုစွဲဆောင်သည် အရည်အသွေးဓာတ်ပုံ နှင့် အထင်ရှားဆုံးရှုခင်းများမရ။ စံပြ၊ youtuber နှင့်ကျွမ်းကျင်သောဆက်သွယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်သူသည်အခြားအားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန် campervan ကိုခေါ်သွားသောသူ့အတွင်း၌စွန့်စားရဲသောစိတ်ရှိသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ သူသည်သူ၏လက်ရှိလက်တွဲဖော်နှင့်လမ်းပေါ်တွင်ရက်အနည်းငယ်ကြာပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကပိုထူးခြားစေသည်။ ငါဆိုလိုတာက၊ ဒါကိုမြင်ပြီးဘယ်သူကမှလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။
၃။ SUSANA MOLINA (@ susana_bicho90)
သူမရဲ့ Instagram အသုံးပြုသူအမည်က Susana "Bicho" လို့ လူသိများတဲ့ Susana Molina ဟာ reality show ကြောင့် မီဒီယာမြင်ကွင်းထဲကို ခုန်ဆင်းသွားပါတယ်။ Big Brotherမရ။ နောက်တော့ သူမကို ငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။ သွေးဆောင်မှုကျွန်း အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကတစ်ခုအနေနဲ့ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့မျက်နှာပြင်ကျော်ကြားမှုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာ၊ လွှမ်းမိုးနိုင်သူလည်းရှိတယ်ဆိုတာငါတို့တွေ့ခဲ့တယ် စွန့်စားရဆုံး တစ်ဖက်မရ။ သူတစ် ဦး အောင်အပေါ်အလောင်းအစား စခန်းတစ်ခုတွင်လမ်းကြောင်း အချို့ကိုသုံးစွဲပါ ကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်များ သူ၏အကောင့်တွင်ထင်သည့်အတိုင်းသူအလွန်နှစ်သက်သည်။
Susana Molina ကဲ့သို့ Hugo Pérezသည်လည်းသူ၏မီဒီယာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၌စတင်ခဲ့သည် Big Brother ၎င်းသည်ထုတ်ဝေမှုများထဲမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် သွေးဆောင်မှုကျွန်းမရ။ သူ့ရဲ့ ပရိုဖိုင်မှာ သူ့ရဲ့ followers အများစုကို ပြသထားပါတယ်။ ရဲရင့်ပြီးအားကစားဆန်သည်တောင်တက်လမ်းများ၊ snorkeling လုပ်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လှော်တက်စီးခြင်း၊ ဂျက်စကိတ်စီးခြင်း ... camper တွင်ခရီးသွားခြင်း။မရ။ နေ့တိုင်းသူကရှုခင်းအသစ်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုငါတို့ကိုအံ့သြစေတယ် သဘာဝ အရည်အသွေး။ သူသည်တိရစ္ဆာန်များကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူ၏စွန့်စားမှုများတွင်လိုက်ပါရန်အမြဲကြိုးစားသည်။
၅။ ENGELA ROZAS (@Madamederosa)
Angela ကိုသူမ၏ပထမနာမည်ဖြင့်မသိသော်လည်းသူမ၏အင်တာနက်နာမည် Madame de Rosa သူမဖက်ရှင်နဲ့လူနေမှုဘ ၀ ပုံစံဘလော့ဂ်ကို ၂၀၁၁ မှာစဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲဒါတွေအားလုံးကစတင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူမဟာတီဗီရှိုးအနည်းငယ်အပြင်စတိုင်လ်စတိုင်လ်တစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာပါ ၀ င်လာခဲ့တယ်။ သူနာပြုဆရာမတစ် ဦး အနေနှင့်သူမ၏အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုသည်သူမ၏အင်စတာဂရမ်ပရိုဂရမ်တွင်ရှိခဲ့သည်မှာသေချာသည်၊ ၎င်းကိုသူမကဲ့သို့လူများကမည်သို့ပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ချင်သည်။ camper စွန့်စားမှုမရ။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံး၌သူမသည်အမြဲအလုပ်များနေသောအချိန်ဇယားတစ်ခုနှင့်ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် အဆက်အသွယ်ပြတ်သောအချိန်မရ။ မြို့နဲ့ဝေးတဲ့လမ်းခရီးထက်ပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်မလဲ။
၆။ ဂျွန်နန်ဝီဂါ (@jonanwiergo)
အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကစွန့်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်သော Jonan Beltrán Wiergo သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်Pekín Express အစီအစဉ်မှကျော်ကြားမှုအတွက်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ Valencian သည်သူလုပ်ခဲ့သည့်ပရောဂျက်တစ်ခုစီ၌သူ၏ရဲရင့်ဆုံးမျက်နှာကိုမည်သို့ပြရမည်ကိုသိသည်။ ခရီးသွားရတာ ဝါသနာပါတယ်။ သင်၏အကောင့်သည်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုပုံစံဖြင့်ကမ္ဘာ့မြေပုံဖြစ်လွယ်သည်။ Jonan ဟာအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ် camper လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်လောင်းပါအမှန်တော့၎င်းသည် Voltereta စားသောက်ဆိုင်မှပြုလုပ်သောမဲနှိုက်ပွဲ၏မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည် (ငါတို့အားအနည်းငယ်ပြောပြမည်) ။
၇။ AIDA DOMENECH (@dulceida)
ယေဘုယျအားဖြင့် Dulceida ဟုလူသိများသော Aida Domenech ၏လမ်းကြောင်းသည်အထက်ဖော်ပြပါ Madame de Rosa နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ဟုဆိုသည်။ သူမသည် ၂၀၀၉ တွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သူမယနေ့လူသိများသောနာမည်အောက်တွင်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ ပုံစံနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံများကိုနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်နှင့်အညီလိုက်ဖက်သည်။ Instagram ၏ပုံပန်းသဏ္ာန်သည်သူမ၏ဘ ၀ ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာခုန်တက်စေခဲ့ပြီးသူမသည်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်အချို့တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူမသည်အမြဲလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည် ခရီးသွားခြင်းနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်စိတ်ဓာတ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထက်သန်သည်မရ။ သူမသည်နွေရာသီ (သို့) ဆောင်းရာသီ၌ camper van တစ်ခုတွင်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။
VIRAL ဖြစ်လာသော CAMPER ၏ဆွဲအား
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Instagram Giveaway လက်ဆောင်တစ်ခုကိုမင်းသေချာပေါက်မှတ်မိမှာသေချာတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောစပိန်လူမျိုးများသည်ဤထုတ်ဝေမှုကိုမျှဝေခဲ့ကြသောတရားခံမှာ Voltereta (ငါတို့ကြိုးစားပြီးချစ်ခဲ့ဖူးသော၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအခြားကိစ္စ) ဖြစ်သည်။ Valencian မြို့တော်၌၎င်း၏တတိယမြောက်တည်ထောင်ခြင်းကိုကြေငြာရန်ကြော်ငြာမြှင့်တင်ခြင်းသည် springboard တစ်ခုအနေနှင့် Valencia (နှင့်တစ်တိုင်းပြည်လုံး) သည်သတင်းကိုသံယောင်လိုက်သည်။ ဤပရိုမိုးရှင်း၏ဗီဒီယိုသည်မှတ်ချက်တစ်သန်းရရှိခဲ့သည်။ သန်း! လူတိုင်းကလိုချင်ခဲ့တာ ဗန် စားသောက်ဆိုင်အဖွဲ့သည်ဒီဇိုင်းတစ်ခုနှင့် ၀ တ်ဆင်ထားသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည် အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက် ဟုတ်ပါတယ်၊ အလွန်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ “ (…) သင်လိုအပ်သမျှနှင့် ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားပါမရ။ စိတ်ပါ ၀ င်စားမှု၊ အိပ်ခန်း၊ ဆိုဖာ၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ စားပွဲတင်၊ အလှဆင်ခြင်း…စသည့်စိတ်အားထက်သန်မှုများနှင့်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စွန့်လွှတ်လိုက်ရသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းမိသည်အထိရှိသည်။ မဲနှိုက်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် camper van သည်စားသောက်ဆိုင်၏ ၀ ိညာဉ်အကြောင်းကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောတတ်သည်။ တကယ်တော့ငါတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကတောင်မှသူ့ရဲ့အလံပါတဲ့စာသားပါတဲ့ Hotelier အုပ်စုနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ခံရသလိုခံစားရတယ် ခရီးမှကြိုဆိုပါသည်မရ။ ငါဆိုလိုတာကငါတို့ကအဲဒါကိုစွန့်စားမှုတစ်ခုအဖြစ်မခံယူရင်ဘဝကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ ငါတို့မစွန့်စားဘူးဆိုရင်ငါတို့သိတာတွေကိုကန့်သတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
ဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြသည့် ဆောင်းပါးများစွာကို ကောက်ချက်ချပြီး ကျွန်ုပ်တို့လည်း သဘောတူထားသည့်အချက်မှာ စပိန်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် သေးငယ်သောအပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်လိုသည်ဟု ကောက်ချက်ချပါသည်။ အခုချိန်ထိ သိထားတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံက ပိုငတ်တယ်။ Camper တွင် ခရီးထွက်ခြင်းသည် သင့်ဘဝကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ သင့်ကိုလျစ်လျူရှုမထားဘူးမရ။ လွတ်လပ်မှု၊ လမ်းပေါ်တွင်၊ သဘာဝတရားနှင့် အပြည့်အဝထိတွေ့မှု၊ တရားမျှတပြီး လိုအပ်သောအရာကို လျှောက်လှမ်းခြင်း (မမေ့မလျော့ဘဲ၊ ငါတို့ရဲ့ ဦး ထုပ်တစ်လုံးကိုယူ နေရောင်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့) နဲ့အရာအားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဝေမျှပါ ... အဲဒါကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်။
ကဲ၊ ဒီစခန်းမှာဘယ်သူအနိုင်ရလဲ။ သူမနာမည် Marta Carceller ဖြစ်ပြီးသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ကွဲပြားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဆီကနေငါတို့စုစည်းမှုအရသူမအနေနဲ့ဒီစာအုပ်မှာစုစုပေါင်းမှတ်ချက် ၂၈ ချက်ကျန်ခဲ့တယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၀၀ ခန့် လာရောက်၍ သုံးစွဲသူများရှိခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်မဲနှိုက်ခြင်းကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟူသောယုံကြည်ချက်မပါဘဲသူသည်သူတို့ကြေငြာခဲ့သောစားသောက်ဆိုင်၏ Instagram အကောင့်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ သူမအထဲကို ၀ င်ဖို့သူ့ကိုပြောဖို့သူမသူငယ်ချင်းတွေပဲ။ ပုံသွား! တကယ်တော့ဒါဟာအတော်လေးနားလည်နိုင်ပါတယ်။ ငါဆိုလိုတာကငါတို့က "Instagram Giveaway တွေမထိနဲ့" လို့အမြဲတွေးလေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ... ငါတို့လုပ်ခဲ့တာကိုမင်းမှတ်မိလား။ အတိအကျ! ငါတို့ကပထမဆုံး ငါတို့ဒီခရီးမှာမင်းနဲ့အတူလိုက်ချင်တယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲ။ မင်းရင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာငါတို့သိတဲ့စွန့်စားရဲတဲ့စိတ်ကိုနိုးပါ။
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ပထမဆုံးအကြံပေးတာကမင်းအဲဒါတွေပြောထားတဲ့ငါတို့ရဲ့ယခင်ဆောင်းပါးကိုမင်းဖတ်ဖို့ပဲ camper ဗင်ကားများမရ။ ကဲ၊ မင်း camper အတွေ့အကြုံနဲ့စမ်းကြည့်ချင်လား မင်းဘယ်ကစရမှန်းမသိဘူး? ကောင်းပြီ၊ ငါတို့အလုပ်စရအောင်။ ၎င်းကိုနှစ်သက်သောကွဲပြားခြားနားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သင်ပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်အမှန်တရားသည်သင့်အားပျော်ရွှင်စေရန်ဤလုပ်ငန်းကိုကူညီရန်အခြားအကောင့်များစွာရှိသည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုကြည့်ရတာလွယ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လူမှုကွန်ရက်တွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုသမျှကိုပြောပြရာတွင်အထူးပြုထားသောပရိုဖိုင်များဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့၏အိမ်များကိုဘီးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခိုးဝင်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ယောက်တည်းနှင့်ပင် bug သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုကိုက်သည်။ တကယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ #VanLife ကိုအပြည့်အဝနေထိုင်ပါ?
ငါတို့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ပထမဆုံးပုတီးကိုခေါ်တယ် @thevandreamsမရ။ သူမ၏နောက်တွင် Raquel နှင့်Jesú, Madrilenian စုံတွဲသည်သူမ၏ Instagram အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဗန်မှတဆင့်ဘဝကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လာမယ့်သီတင်းပတ်ကုန်မှာမင်းမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြေးနိုင်တဲ့အခါအံ့သြဖို့ကောင်းတာကမင်းအလုပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းမြင်ချင်တဲ့အရာအားလုံးပါ ၀ င်တယ်။ ပင်လယ်၊ တောင်တန်းများ၊ နေဝင်ချိန်များ၊ ရှုခင်းများနှင့်နံနက်စာများ၊ ဝေးလံသောကမ်းခြေများပေါ်တွင်လှော်ခတ်ခြင်း ... ဤကဲ့သို့သောဘဝမျိုးကိုမနေချင်သူမည်သူနည်း။ အနည်းဆုံးတော့သူ့ကင်မရာကနေဒါကိုငါတို့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းငယ်သေးငယ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို လုံး၀ လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာအရည်အသွေးဖြင့် အခြားအကောင့်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါသည်။ အမည်ပေးထားသည်။ @roadforgreta မင်းခန့်မှန်းပြီးသားဖြစ်နိုင်သလို၊ ဇာတ်လိုက်က Greta လို့ခေါ်တဲ့ Volkswagen Multivan ပါ။ ၎င်း၏ပိုင်ရှင် Ana နှင့် Marco တို့သည်အဆုံးမရှိသောနေရာများမှတဆင့် သွား၍ သူတို့၏နောက်လိုက်များအားဝေမျှပါ၊ ဤယာဉ်သည်အသက် ၃၀ ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်မိသားစုတစ်ခုကဲ့သို့၎င်းအားပြသသည်။ ငါတို့ချစ်တယ်!
ငါတို့မင်းကိုပြချင်တဲ့နောက်ဆုံးအကောင့်ကိုခေါ်တယ် @woodvans_loren ၎င်း၏ပိုင်ရှင်သည်ဗင်ကားများကိုအမှန်တကယ်နှစ်သက်သည်။ သူသည်နေရာအသစ်များသို့ရောက်သောအခါသဘာဝနှင့်အပြည့်အ ၀ ထိတွေ့မှုရှိသည်၊ သူ၏ပုံပြင်များတွင်ပြသသည့်အတိုင်းသူသည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နေထိုင်သည်။ ငါတို့မင်းရဲ့စွန့် ဦး တီထွင်စိတ်ဓာတ်ကိုငါတို့တကယ်ကြိုက်တယ်။ ရဲရင့်ခြင်းထက်အိန္ဒိယကဘာပိုများလဲ။ သူသည် Woodvans handmade ဟုခေါ်သောဗင်ကားများတည်ဆောက်ခြင်းအပြင်၊ ဤသည် #VanLife ဟုခေါ်သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပရောဂျက်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။
Ventura မီးခိုးရောင် / အနီရောင်